Matabaan - Wikipedia
Matabaan ama Matabaan Garoore waa Dagmo ku taala dhank waqooyi ee gobolka Hiiraan, una jirta 75 kiilo mitir magalada Baldweyne ee Caasimada gobolka Hiiraan,
1 Tilmaan guud
3 Dhaqaalaha iyo nolosha
5 Dhul ahaan
6 Xaafadaha magaalada
Tilmaan guud[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Mataban wa magalo tariikh dheerleh, waxana la aas aasay dhamadaki qarnigi 19 tobnaad. Sida laso xigto, magalada waxa aas aasay Macalim Cumar Sh xassan Cade Faqa cumar iyo wiilashiisa.(sh Ali, sh Mohamed iyo macalima Adan)
Bulshada magalad ku nool waxey tiro ahan garayan 20,000 oo qof .Bulshadu 20,000 oo kaliya kuma eka, oo waxa magalada ku xiran oo marwalib yimada bulshoyinka dagan tuuloyinka kudhaw-dhaw magalada Mataaban.
Cimilada magaladu wa mid qaboow xiliga subixi iyo habeenki. Waqtiyada duhirki , gar ahan xilayada abarata ah magaladu wa kulushahay, oo heer kulku waxa uu gaara ilaa 30 °C (91 °F), lakiin habenki cimiladu wa qabowda.
Magaladu roob fiican ayeey heli jirtay xiliyada Guga iyo Deyrta, lakin burbur raga dhuxusha ka ganacsada eey ugeeysteen hareeraha magalada, aya sababay in magaladu eey hesho sanadahan danbe roobab aan sida u badneen, taaso kentay in magaldu abaaro wajahdu sandba sandka ka danbeya.
Dhaqaalaha iyo nolosha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Ganacsi ahaan magaaladu waxey ledahay suuq weyn, kasoo lagu kala iibsado xoolaha nool , canahooda iyo subagooda. Magaaladu sido kale waxey ledahay maqayadu cuna macaan laga helo iyo suuqaq lagu gado dharka , raashinka iyo maciishadaha kale duwan taas oo dadka xoolaha leh eey siwanagsan uu gadatan.
Magaladu waxey ledahay Al-beergoyin ( Hotel) la sexdo , kuwas oo saa'id u raqiis ah, kana rqisan magaloyinka kale ee Guriceel iyo Baladweyne, taas oo sababataya in magaladu macamisheda korarato.
Magaladu waxey leedahay suuq weyn oo caanaha dhayda ah iyo waliba garoorka laga helo. Sidas darteed magalada waxa lagu magacabay Mataban Garoore. Magacan waxa ubaxshahy dadka safarka kumari jiray magalada, madama eey ka helen cano garoor ah , kuws oo aan laga heli jirin magaloyinka kale ee ku dhawdhaw Mataban.
Magaladu dhul ahan waxey ku tala dhul sareeya, oo siman. Waxey ka mid tahay meelaha ugu sareeya Soomaaliya, taaso oo ka dhigtay magalada mid qaboow subixi iyo habeenkiiba..
Biyaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Magaldu wxey ledahay 3 ceel oo biyaha laga cabo, lakin hada waxa shaqeya oo kaliya halmid, ee loogu yeero Gawgawleye. Ceelkani si wanaagsan ayuu u shaqeeyaa wuxuna isha kaliya ee biyaha u yahay , dadka magalada ku nool, reer miyiga xoolahoda keensada iyo waliba tuulooyinka kudhaw magalada oo aan ceelal laheen. Ceelku wa mid saaid ah u biya macaan, waxana qoday Dawladda Jarmalka.
Dhul ahaan[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dagaalki 77 ee udhaxeyaya Soomaaliya iyo Itoobiya, waxa lasheega in duuliyashii itoobiyanka ahaa, ee duulin jiray Duyuradihii dagalaka ee itoobiya, eey ugu hor arki jireen magalada Matabaan, madama magaladu kutaalo dhul ka sareeya magaloyinka kale ee la dariska ah.
Qabiil ahaan magaalada waxa daga Beesha Hawaadle .
Xaafadaha magaalada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dagmadu waxeey ka koobantahay xaafad ahaan
Xaashi indho buur
Barakaat ama Hormuud
ceelka biyaha ama Matoorka 9
xaafada macalin Adan
Sida maglooyinka kale ee dalka, magalada waxa ka dhacay dagaalo badan oo qaba'il iyo waliba mid u dhaxeyay xogaga kale 1977 , dagaalki Itoobiy iyo Soomaaliya, Diayaradaha dagalka ee Itoobiya waxey si saa'id u duqeeyeen magaalda, kuwaas oo burbur u geystay magalada.
Magalada waxa kale oo ka dhacay dagaal u dhaxeyay Jamhadaihii kasoo horjeday dowladi Siyaad Barre iyo ciidamadi dowlada, kasoo oo isagana geyst burbur badan.
Dowladii Siyaad Bare kadib, waxa kale oo magalada ka dhacay dagaal . Sido kale, magalada waxa ka dhacay Dagal saa'id uweyna oo u dhaxeyay cidamadi Itoobiya ee dalka qabsaday iyo Maxkamadihi Islamiga ahaa. Dagalkani waxa uu ka dhacay inta u dhaxeyda Xafada Cabdi salan iyo Shiina qarxiska. Qaasarah so garay dhanka Itoobiyanka lam yaqano, lakiin dadka dagmada dagan, qaarkii waxa eey shegaan in ciidamo aad ufara badan oo Itoobiyan ah lagu dilay dagalka. Dhanka Maxkamadaha qasaruhu wuu koobnaa, lakin waxa ku dhintay dagalkas, rag aad looga yaqanay bulshada Somaliyeed dhexdeeda, sida Macalin Farxan oo ahaa taliye weyn oo Cidamadi Maxkamadaha katirsana iyo Aasbaro oo aha nin Hantila ah, oo heystay baasaborka Canada, qeyb weyna kalaha Shirkada isgarsiinta ee hormuud.
waxaa Soo uruuriyay Eng.Ahmed Mohamed farah
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Matabaan&oldid=199793"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Maarso 2020, marka ee eheed 14:24.